नि: शुल्क र सजिलो Wireframing Wireframe.cc साथ Martech Zone
Wireframe.cc को साथ नि: शुल्क र सजिलो वायरफ्रेमिंग
शुक्रबार, जनवरी 4, 2013 शुक्रबार, जनवरी 4, 2013 Douglas Karr
हुनसक्छ हामीले तारफ्रेमिंग के साथ शुरू गर्नुपर्दछ! वायरफ्रेमिंग डिजाइनरहरूको लागि पृष्ठमा एक कंकाल लेआउट द्रुत रूपमा प्रोटोटाइप गर्नको लागि एक साधन हो। वायरफ्रेम्सले पृष्ठमा वस्तुहरू प्रदर्शन गर्दछ र एक अर्कासँग उनीहरूको सम्बन्ध, तिनीहरू शाब्दिक ग्राफिक डिजाइन समावेश गर्दैन। यदि तपाइँ वास्तवमै तपाइँको डिजाइनरलाई खुशी पार्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँलाई तपाइँको अनुरोधको एक वायरफ्रेम प्रदान गर्नुहोस्!
मानिसहरू कलम र कागजबाट माइक्रोसफ्ट वर्ड, बाट सबै प्रयोग गर्छन् उन्नत सहयोग वायरफ्रेमिंग अनुप्रयोगहरू तिनीहरूको वायरफ्रेमहरू डिजाइन र साझेदारी गर्न। हामी जहिले पनि उत्कृष्ट उपकरणहरूको खोजीमा हुन्छौं र यो हाम्रो विकासकर्ता जस्तो देखिन्छ, स्टीफन कोली, एक महान न्यूनतम भेटियो जुन प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छ - Wireframe.cc
Wireframe.cc मा निम्न सुविधाहरू छन्
ड्र गर्न क्लिक गर्नुहोस् र तान्नुहोस् - तपाईंको वायरफ्रेमको तत्त्वहरू सिर्जना गर्न सजिलो हुन सक्दैन। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको क्यानभासमा एउटा आयत कोर्नु हो र स्टेन्सिल प्रकार छन जुन त्यहाँ घुसाइनेछ। तपाईं क्यानभासको बीचमा तपाईंको माउस तान्दै र पप-अप मेनूबाट एक विकल्प चयन गरेर यो गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं केहि पनि सम्पादन गर्न चाहानुहुन्छ भने यसलाई डबल-क्लिक गर्नुहोस्।
सुपर न्यूनतम इन्टरफेस - अनगिन्ती टूलबार र आइकनहरूको सट्टा जुन हामी सबैलाई अन्य उपकरणहरू र अनुप्रयोगहरूबाट थाहा छ Wireframe.cc एक अव्यवस्था मुक्त वातावरण प्रदान गर्दछ। अब तपाईं आफ्ना विचारहरूमा फोकस गर्न सक्नुहुनेछ र सजिलैसँग फेर्नु अघि उनीहरूको स्केच गर्नुहोस्।
सजिलैसँग एनोटेट गर्नुहोस् - यदि तपाईं निश्चित हुन चाहनुहुन्छ कि तपाईंको सन्देश तपाईं मार्फत आउँदछ तपाईं सधैं तपाईंको वायरफ्रेममा टिप्पणी गर्न सक्नुहुनेछ। एनोटेसनहरू क्यान्भासमा अन्य वस्तुहरू जस्तै बनाइन्छन् र तिनीहरू खोल्न र बन्द गर्न सकिन्छ।
सीमित प्यालेट - यदि तपाईं आफ्नो वायरफ्रेमहरू कुरकुरा र स्पष्ट भएको चाहनुहुन्छ भने तपाईंले त्यसलाई सरल राख्नु पर्छ। Wireframe.cc विकल्पहरूको धेरै सीमित प्यालेट प्रस्ताव गरेर तपाईलाई त्यो प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ। त्यो र color्ग प्यालेटमा लागू हुन्छ र स्टेंसिलको संख्या जुन तपाइँले छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यस तरिकाले तपाईंको विचारको सार अनावश्यक सजावट र फैन्सी शैलीहरूमा कहिले हराउने छैन। यसको सट्टामा तपाईले हात तानेको स्केचको स्पष्टताको साथ एउटा वायरफ्रेम पाउनुहुनेछ।
स्मार्ट सुझावहरू - Wireframe.cc तपाईंले चित्रण गर्न चाहेको कुरा अनुमान गर्न कोशिश गर्दैछ। यदि तपाइँ एक फराकिलो र पातलो तत्त्व रेखाचित्र को लागी शुरू गर्नुभयो भने यो ठाडो स्क्रोलबार वा सर्कलको सट्टा हेडलाइन हुने सम्भावना बढी हुन्छ। तसर्थ, पप-अप मेनूले केवल तत्वहरूको आइकनहरू समावेश गर्दछ जुन यो आकार लिन सक्दछ। उही समान सम्पादनको लागि जान्छ - तपाईं केवल विकल्पहरूको साथ प्रस्तुत हुन्छन् जुन दिइएको तत्वका लागि लागू हुन्छ। यसको मतलब पैराग्राट सम्पादनको लागि उपकरणपट्टीमा बिभिन्न आइकनहरू र साधारण आयतका लागि फरक।
Wireframe वेबसाइटहरू र मोबाइल अनुप्रयोगहरू - तपाई दुईवटा टेम्प्लेटबाट छनौट गर्न सक्नुहुनेछ: एउटा ब्राउजर विन्डो र मोबाइल फोन। मोबाइल संस्करण ठाडो र परिदृश्य अभिमुखिकरणमा आउँदछ। टेम्पलेटहरू बीच स्विच गर्नका लागि तपाईं माथिको बाँया कुनामा आईकन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ वा केवल यसको तल दायाँ कुनामा ह्यान्डल प्रयोग गरेर क्यान्भास रिसाइज गर्न सक्नुहुनेछ।
साझा गर्न र परिमार्जन गर्न सजिलो - प्रत्येक तारफ्रेम जुन तपाईं बचत गर्नुहुन्छ एउटा अद्वितीय यूआरएल प्राप्त गर्दछ जुन तपाईं बुकमार्क वा साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं भविष्यमा कुनै पनि समय आफ्नो डिजाइनमा काम गर्न पुनः सुरु गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तपाईंको वायरफ्रेमको प्रत्येक तत्व सम्पादन गर्न सकिन्छ वा केही अर्कोमा पनि रूपान्तरण गर्न सकिन्छ (उदाहरणका लागि बक्सलाई अनुच्छेदमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ)।
टैग: सासवेब डिजाइनवेब डिजाइन उपकरणहरूwireframeवायरफ्रेम उपकरणहरूतारफ्रेमिंगवायरफ्रेमिंग उपकरणहरू
ToutApp: बिक्री ट्र्याकिंग, टेम्पलेट्स र एनालिटिक्स
स्प्रिडेफास्ट: इन्टरप्राइज सोशल मीडिया प्रबंधन